Kungani ukhetha uhlelo lwangaphandle lwezimpawu zedijithali? - Easy Multi Khombisa
I-Digital Signage ne-Video Wall Software
Isixazululo esingabizi kakhulu emakethe!
Isikhungo Somyalo Nesicishamlilo
Izikrini Zamukelekile Zedijithali
Izindawo zokudlela nezindawo zokudla
Izicishamlilo nezikhungo zokutakula
Cellarman & Iwayini Sela
Isitolo sezingxenye zezimoto ezingasebenzi
AmaKhemisi namaQembu ekhemisi
Ama-Real Estate Agencies
Izibhedlela nezinsizakalo Eziphuthumayo
Kungani ukhetha uhlelo lwangaphandle lwezimpawu zedijithali?
Awekho amazwana kokuthi Kungani ukhetha isistimu yezimpawu zedijithali yangaphandle?Posted in I-Digital Signage By ClemPosted on 26 / 05 / 2021 28 / 05 / 2021
Yini uphawu lwangaphandle lwedijithali?
Kungani usebenzisa uhlelo lwezimpawu lwedijithali lwangaphandle?
Intengo yohlelo lwangaphandle lwezimpawu zedijithali?
Uma ufuna ukwazi okwengeziwe
Usanda kuzwa nge "izimpawu zangaphandle zedijithali"kodwa awazi ncamashi ukuthi iyini? Noma umane ufuna ukwazi kabanzi ngalolu hlelo olusetshenziswa kakhulu kuzo zonke izinhlobo zamabhizinisi?
Izimpawu zedijithali ziza ngezindlela eziningi futhi siyazi ukuthi kungaba nzima ukuqonda ukwahluka ngakunye komkhiqizo. Yingakho namhlanje sinqume ukukhuluma nawe kabanzi mayelana izimpawu zangaphandle zedijithali!
Ibhodi lokukhangisa elibizwa nangokuthi "totem"(ikakhulukazi i-LED) ikuvumela ukuthi ukhangise ngaphandle, udlulise imininingwane noma ukhuthaze imicimbi kamasipala, ezemidlalo ...
Njengoba sishilo phambilini, iningi lale totems lisebenzisa ubuchwepheshe be-LED ngoba ibenza bukhanye futhi buhehe kakhulu abadlula ngendlela.
Uhlelo lwezimpawu lwangaphandle lukuvumela ukuthi ukhangise kalula uphawu lwakho. Ngaphezu kwalokho, lolu hlelo luhambisana nezidingo zakho, impela, osayizi abaningi bayatholakala kusuka Amasentimitha angu-22 kuya kwangu-65.
Ngaphezu kwalokho, lolu hlelo luvikelwe esimweni sezulu kanye nasekucekelweni phansi kwempahla, kepha uma usakusaba lokho, usengathenga umshuwalense!
Ngohlelo olufana nalesi, uqinisekile ukubeka uphawu lwakho futhi ugqame emncintiswaneni. Ngaphezu kwalokho, ungakha ngqo umkhankaso wakho wokumaketha. Futhi uzokwazi ukuzimela ngokuphelele futhi ungaguqula ukuboniswa kwakho ngokuya ngezifiso zakho!
Intengo yohlelo olunjalo iyahlukahluka kuye ngomshini nobungako besikrini njengoba iningi lalawa totems linekhompyutha ehlanganisiwe. Uma ufuna ibanga lentengo elifanele, ungabala phakathi kuka-1000 € no-8000 € ekhokhwa kanye noma kaningana.
Kungabonakala kubiza kakhulu kepha izinzuzo zezomnotho nazo zingaba zikhulu! Uzothola ukubonakala okuningi futhi ungaphindaphinda amakhasimende akho.
Uma ufuna ukwazi kabanzi ngezimpawu zedijithali ikakhulukazi, ungabheka izindatshana zethu ngale ndaba. "Kuyini ukuboniswa kwezimpawu zedijithali?"Noma"Izindlela ezi-5 zokwenza ngcono isipiliyoni samakhasimende nge-software yezimpawu ezidijithali".
Ungavakashela ne Digital Signage Namuhla iwebhusayithi ekhomba izindatshana eziningi ezithokozisayo ngalesi sihloko.
Iyiphi i-hardware yezimpawu zedijithali okufanele ngiyisebenzise?
I-Easy Multi Display ingakusiza kanjani ukuthuthukisa ukubonwa kwedatha yakho?
I-Virtual Cockpit UK ekhawulelwe Ngokwabelana
📍71-75 Shelton Street, Covent Garden, eLondon WC2H9JQ
I-EMD isatshalaliswa ku-EEC ngabakwaTekAngel
Abangu-198 Allée des écureuils, 34980 St Gély Sur Fesc
📞 Indoda (+33) 679075519
I-Easy Multi Display User Guide V2
Ngikukhombisa kanjani ukukhushulwa?
Ungayisebenzisa kanjani irimothi yethu?
Ungawubonisa kanjani umyalezo wombhalo?
Uzisebenzisa kanjani izikrini ezi-2 ku-WIN10?
Ungawabonisa kanjani amavidiyo ambalwa ngokulandelana?
Ungasikhombisa kanjani isithombe esifanayo ezitolo eziningana?
Ungawaveza kanjani amafayela wakho we-PowerPoint?
Yini imbobo yokubonisa?
Izinzuzo eziyi-7 ze-Digital Display
Ungazisebenzisa kanjani izimpawu zedijithali ezitolo zakho zemithi?
| I-copyright © Easy Multi Display 2021 Digital Signage & Video Wall Software yamabhizinisi |